निर्वाचन प्रचारप्रसारमै अर्बौं खर्च « Sthaniya Khabar
प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७४, सोमबार ०९:५६
हरि लामिछाने । काठमाडौँ, आगामी आइतबार हुन लागेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि अर्बौं रकम खर्च हुने देखिएको छ ।
प्रदेश नं. ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ वटा स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि दर्ता भएका कुल ४९ हजार ७१ जना उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा खर्च अर्बौं हुने देखिएको हो ।
आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गराउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही कुल रु. सात लाख ५० हजार निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउँछन् । महानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले रु. तीन लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमखले जनही रु. पाँच लाख ५० हजार तथा उपमहानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले रु. दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नगरपालिकाकाको प्रमुख र उपप्रमुखले जनही रु. चार लाख ५० हजार तथा अध्यक्ष र सदस्यले रु. दुई लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु ती लाख ५० हजार र वडा सदस्यले रु. एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ । स्थानीय तहकै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखले दुई लाख ५० हजार र सदस्यले रु. एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
दर्ता भएका ४९ हजार ७१ उम्मेदवारमध्ये नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा एक हजार ९२५ र नगर उपप्रमुख, उपाध्यक्ष पदमा एक हजार ४२९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै वडाध्यक्ष पदमा १० हजार ८४१, वडा सदस्य (खुला)मा १८ हजार ३७१, महिला सदस्य पदमा नौ हजार ३३ र दलित महिला सदस्य पदमा सात हजार ४७२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
ज्ञवाली भन्छन्, “उम्मेदवार र मतदाता आश्वस्त हुन निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च पर्याप्त हुँदैन । देखिने र नदेखिने खर्चको अन्तर बढी हुन्छ ।” उनका अनुसार यसले अर्थतन्त्रमा खास योगदान गर्दैन तर अपारदर्र्शिता बढाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चमा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “राजनीतिक दलको देखाउने र गर्ने अर्कै हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि तोकिएको सीमा पार गरेर खर्च हुन्छ ।”
हजारौँ जनप्रतिनिधि चुनिने यस महान् अवसरमा ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनः राष्ट्रको गौरव’ भन्ने नारामै सीमित त हुने होइन भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, “निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा धेरै गुणा निर्वाचन खर्च बढ्छ । यसले अपारदर्शिता बढाउँछ ।” उनका अनुसार आयोगको नियत असल भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन ।
दोस्रो चरणमा हुने प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा हुने निर्वाचनमा झनै खर्च बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ । सो निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको रु. १० अर्ब २९ करोड पनि अपुग हुने र खर्बौं खर्च हुने देखिएको छ । रासस